निस्सन्देह सबै एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूमा व्हाट्सएप सबैभन्दा लोकप्रिय इन्स्ट्यान्ट मेसेजिंग अनुप्रयोग हो। एउटा अनुप्रयोग जसले हामीलाई साथीहरू, सहकर्मीहरू वा परिवारसँग स्वतन्त्र र सजिलैसँग सञ्चार गर्न अनुमति दिन्छ। तसर्थ, यसको आफ्नै वर्ग छ, जहाँ तपाईं अनुप्रयोगको बारेमा सबै कुरा जान्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं यस सेक्सनमा व्हाट्सएपको बारेमा सबै समाचारहरू, युक्तिहरू वा ट्यूटोरियलहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए तपाईलाई थाहा छ कि अनुप्रयोगमा के हुन्छ, यसमा नयाँ प्रकार्यहरूको आगमन वा युक्तिहरू जुन तपाइँ यसलाई तपाइँको एन्ड्रोइड फोनमा यसलाई अझ राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहुन्छ वा यसको बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ भने, यो कोटी तपाईंको आदर्श गन्तव्य हो।
व्हाट्सएपका लागि सबै भन्दा राम्रो समूह नामहरू
द्वारा आरोन रिवास बनाउँछ १ हप्ता .
व्हाट्सएप विश्वव्यापी रूपमा सबै भन्दा व्यापक प्रयोग हुने इन्स्ट्यान्ट मेसेजिंग अनुप्रयोग हो, र यो नै हो किन सामान्यतया ...
बहु-उपकरण व्हाट्सएप, वास्तवमा? हामी यसलाई जाँच गर्छौं !!
द्वारा दानीप्ले बनाउँछ2हप्ता .
हालसालैका हप्ताहरूमा धेरै व्हाट्सएप मल्टि-उपकरण समर्थनबाट बनाइएको छ। हप्ताको प्रतिक्षा पछि, यो हो ...
सम्पर्कमा नम्बर थपे बिना व्हाट्सएपमा कसरी सन्देश पठाउने
द्वारा इग्नासियो साला बनाउँछ2महिना .
चाहे हामीलाई यो मनपर्‍यो वा छैन, व्हाट्सएप सन्देशहरू भरभरि व्यापक रूपमा प्रयोग हुने सञ्चार विधि भएको छ ...
व्हाट्सएप वेबमा फन्ट साइज कसरी बढाउने
द्वारा इग्नासियो साला बनाउँछ3महिना .
चिट्ठीको आकार व्हाट्सएप वेबमा वा सिधा एन्ड्रोइडको लागि अनुप्रयोगमा बढाउँदै, निम्न मध्ये एक हो ...
नि: शुल्क र अधिक गोपनीयता संग WhatsApp को best उत्तम विकल्प
द्वारा फ्रान्सिस्को रुइज बनाउँछ4महिना .
आज हामी तपाईंलाई एक सूचीको रूपमा ल्याउन चाहन्छौं संवादको लागि लोकप्रिय वाट्सएप अनुप्रयोग बदल्नको लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरू ...
व्हाट्सएपले २ messages घण्टा भित्र सन्देश सन्देश पठाउन अनुमति दिनेछ जुन २-घण्टा भित्र आत्म-विनाश गर्दछ
यदि हिजो हामीले बुझ्यौं कि व्हाट्सएपले अन्तत: हाम्रो कुराकानीहरूको प्रतिलिपिहरू गुप्तिकरण गर्दछ, अब हामीलाई थाहा छ कि यसले पठाउनको लागि परीक्षण गरिरहेको थियो ...
व्हाट्सएपले अन्ततः ब्याकअपहरू एन्क्रिप्ट गर्दछ जुन हामीले ड्राइव र आईक्लाउडमा अपलोड गर्दछौं
जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ, व्हाट्सएपले गुगल ड्राईव ब्याकअपको ईन्क्रिप्शनमा काम गरिरहेको थियो र ...
केहि चरणहरु मा WhatsApp स्टिकर बनाउन को लागी
द्वारा दानीप्ले बनाउँछ5महिना .
व्हाट्सएप मेसेजिंग अनुप्रयोगले एक महत्त्वपूर्ण अपडेट प्राप्त गरेको छ जुन यसको प्रयोगकर्ताहरूले राम्रोसँग स्वागत गर्नेछन्। यो…
हामीले साझेदारी गरेका छविहरू स्वयं-विनाश गर्न वाट्सएपले विकल्प थप्नेछ
द्वारा इग्नासियो साला बनाउँछ5महिना .
फेरि, व्हाट्सएपमा केटाहरू, तल बस्दै र नवीनका सुविधाहरू थप गर्ने बारे सोच्नदेखि टाढा ...
व्हाट्सएपले यसलाई बजाउँदछ: पुन: लोड गर्नुहोस्, यसले तपाईंको खाता मेटाउनेछ यदि तपाईं नयाँ गोपनीयता स्वीकार गर्नुहुन्न भने
हामीलाई पहिले नै थाहा छ किन व्हाट्सएपको कारण पछिल्लो महिनामा सिग्नल र टेलिग्राम द्रुत रूपमा बढेको छ। ठीक छ अब फिर्ता जानुहोस् ...
व्हाट्सएप च्याटमा अक्षरहरूको आकार कसरी परिवर्तन गर्ने
पूर्वनिर्धारितद्वारा, व्हाट्सएप च्याटमा अक्षरहरूको आकार मध्यममा सेट गरियो। यद्यपि, केहि ...
WhatsApp मा जासुसी कसरी गर्ने वा दुई फरक टर्मिनलमा उही खाता राख्नुहोस्
पासवर्डबाट कसरी WhatsApp लक गर्ने
कालो वाट्सएप, कालो टेलिग्राम र अन्य अनुप्रयोगहरू विशेष रूपमा AMOLED स्क्रीनहरूको लागि परिमार्जन गरिएको
व्हाट्सएपको इतिहास: उत्पत्ति, विकास र उपलब्धिहरू
केवल २ केबीको सन्देश व्हाट्सएप तोड्न सक्षम छ